ओलीप्रति बाबुरामको टिप्पणी– बयलगाडे धरहरा चढेर परिवर्तनकामीहरूलाई दुत्कार्दैछन् ! – Gandaki Chhadke
ओलीप्रति बाबुरामको टिप्पणी– बयलगाडे धरहरा चढेर परिवर्तनकामीहरूलाई दुत्कार्दैछन् !
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले केपी शर्मा ओलीले धरहरा चढेर परिवर्तनकामीहरुलाई दुत्कारेको टिप्पणी गरेका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत डा भट्टराईले ‘बयलगाडे धरहरा चढेर परिवर्तनकामीहरुलाई दुत्कार्दैछन्’ भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्। २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि नयाँ बनाइएको धरहरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज उद्घाटन गरेपछि डा भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
डा भट्टराईले ट्वीटमा लेखेका छन्,‘लोकतन्त्र दिवस मनाउॅदै गर्दा सबैले याद राखौं-तत्कालीन माओवादी र ७ दल बीच १२ बुॅदे समझदारी हुनुअघि आन्दोलन रत्नपार्क वरिपरि बदाम खाएर घाम ताप्दै थियो १ बयलगाडे महावाणीहरू ओकलिंदै थिए १ शक्तिकेन्द्रहरू २-खम्बे नीति फलाक्दै थिए!अनि आज उनै बयलगाडे धरहरा चढेर परिवर्तनकामीहरूलाई दुत्कार्दैछन्!’
त्यस्तै नायिका गौरी मल्ल पटक–पटक ढलेर पनि धरहरा उठेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नेपालीहरुको जीवनस्तर भने कहिले उठ्छ भनेर प्रश्न गरेकी छिन् ।वि.सं २०७२ सालमा गएको भूकम्पले ढलेको धरहरा पूननिर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै धरहराको उद्घाटन समेत गरेका छन् ।गौरीले धरहरा उठेको प्रसंग कोट्याउँदै लेखेकी छिन्–‘लाग्छ यो पटक धरहराले बलियो बनोट पाएको छ ।
सानका साथ पुनः एक पटक आफ्नो शिर ठाडो बनाउन समक्ष बन्यो ।धरहरा त उठ्यो र पनि मेरो ओठमा गर्वको मुस्कान छैन । धरहराले जस्तै मेरो देशले कहिले उठ्न पाउने ? मेरा देशवासीले पनि धरहराको जस्तै बलियो जग भएको जीवनस्टर कहिले पाउने ? हरेक कोणबाट गिराइसकिएको मेरो देशले शानले फेरि कहिले शिर उठाउन पाउने । धरहराले जस्तै । हो, धरहरा त उठ्यो तर हामी कहिले उठ्ने ?